ကွောကျဖို့ကောငျးအောငျ လုပျနပေမေဲ့ ခဈြဖို့ကောငျးနတောတော့ မတတျနိုငျဘူး ဆိုတဲ့ ရှရေူပါအုံး – Shwe Likes
ရှရေူပါဦး ကတော့ အနုပ ညာလမျွးေ ကာငျးမှာ မျောဒယျတဈေ ယာကျလို့ သူမကိုယျ သူမ ပွောနွေ ကပမေဲ့ ပရိသတျေ တှကတော့ သူမကို တပျ ခဈြသူ လို့ပဲ သိထာွး ကပါတယျေ နျာ. တဈခြို့ဆို ရငျသူမကို ခုမွှ မငျဖူးတာဆိုပွီးေ တာငျ ရေးသားေ နကွပါတယျ။ မကွာခငျ လပိုငျး တုနျးကတော့ သူမ ကိုအေးခြ မျးအောငျလို့ အဘတှေ
က စီစဉျပေး မှုတဈခွုေ ကာငျ့ဆိုပွီးတ ငျလာခဲ့လို့ပှဲဆူသှား ရပွနျပါတ ယျနျော.. သူမကိုယျ တိုငျကလညျး သူမသှားလို ကျတဲ့နရောတို ငျးမှာ စဈသားတှေ နဲ့ဓါတျပုံတှဲရိုကျပွီးေ နာကျအဲ ဒီစဈသားေ တှလညျး တိုကျပှဲမှာ ကဆြုံး သှားကွတာကွောငျ့ သူမလာ မှာကိုေ တာငျစဈသားတှကေ ကွောကျ ကွတယျဆိုပွီးေ တာ့လညျး သတငျး
ပါပွီနျော.. ခုလညျး ရှရေူပါဦးကွေ ကာကျစရာကော ငျးအောငျ ဟိနျးလိုကျတာပဲ ခဈြစရာေ လးဖွဈနတော Shwe လဲမတကျနိုငျဘူး🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️ ဆွိုီး ကြားရုပျကွီးနဲ့ နမျးနေ တဲ့ပုံကို တငျပေး လာတာ ဖွဈပါတယျနျော.
ရွေရူပါဦး ကတော့ အနုပ ညာလမ်ြးေ ကာင်းမှာ မော်ဒယ်တစ်ေ ယာက်လို့ သူမကိုယ် သူမ ပြောနြေ ကပေမဲ့ ပရိသတ်ေ တွကတော့ သူမကို တပ် ချစ်သူ လို့ပဲ သိထာြး ကပါတယ်ေ နာ်. တစ်ချို့ဆို ရင်သူမကို ခုမြှ မင်ဖူးတာဆိုပြီးေ တာင် ရေးသားေ နကြပါတယ်။ မကြာခင် လပိုင်း တုန်းကတော့ သူမ ကိုအေးချ မ်းအောင်လို့ အဘတွေ
က စီစဉ်ပေး မှုတစ်ခြုေ ကာင့်ဆိုပြီးတ င်လာခဲ့လို့ပွဲဆူသွား ရပြန်ပါတ ယ်နော်.. သူမကိုယ် တိုင်ကလည်း သူမသွားလို က်တဲ့နေရာတို င်းမှာ စစ်သားတွေ နဲ့ဓါတ်ပုံတွဲရိုက်ပြီးေ နာက်အဲ ဒီစစ်သားေ တွလည်း တိုက်ပွဲမှာ ကျဆုံး သွားကြတာကြောင့် သူမလာ မှာကိုေ တာင်စစ်သားတွေက ကြောက် ကြတယ်ဆိုပြီးေ တာ့လည်း သတင်း
တွေထွက် လာကြတာ ကြောင့် အားလုံးအတွက်ရီ စရာဟာ သတစ်ခုလို ဖြစ်နေခဲ့ပါေ သးတယ်. မကြာခင်ရ က်ပိုင်းတု န်းကလည်း သူမရဲ့ခြေထောက် ဟာ လူတွေ ထင်နေသ လို ဆင်ခြေထော က်မဟုတ်ကြောင်းသ က်သေ နဲ့.တကွ ရှင်းပြ လာခဲ့ပြန်တာကြောင့် သူမကို အငြိမ့်တွေမှာ လူရွင်တော် လုပ် ခိုင်းရမလိုတောင် ဖြစ်နေ
ပါပြီနော်.. ခုလည်း ရွေရူပါဦးကြေ ကာက်စရာကော င်းအောင် ဟိန်းလိုက်တာပဲ ချစ်စရာေ လးဖြစ်နေတာ Shwe လဲမတက်နိုင်ဘူး🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️ ဆိုြီး ကျားရုပ်ကြီးနဲ့ နမ်းနေ တဲ့ပုံကို တင်ပေး လာတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်.
ပရိသ တ်ကြီးရော သူမက ဘယ်လောက် ချစ်စရာလေး ဖြစ်နေတ ယ်ဆိုတာကို ရေးပေး သွားကြပါအုံးနော်…